Imizamo ephunzile ebaQulusini ngeMeneja yoMkhandlu - Bayede News
USomlomo kaMasipala AbaQulusi usola inhlese yezepolitiki ngemizamo youchitha iMeneja ekhona njengamanje okunguMnu uBonga Evert Ntanzi osekuphele isikhathi eside kuphunywa kungenwa ezinkantolo ngenxa yomdonsiwano ophakathi kwakhe noMnyango Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba ZoMdabu KwaZulu-Natal.
UMnu uMkhonyovu Khumalo onguSomlomo kulo Mkhandlu uthe njengoba ngoLwesihlanu uMphathiswa uSipho Hlomuka egijime waya eNkantolo eyovimba ukuba uNtanzi aqhubeke nomsebenzi wakhe kuMasipala, nabo kuleli sonto inkantolo ibanike igunya lokuba uNtanzi akabuyiswe emsebenzini.
NgoLwesihlanu uNtanzi uthole incwadi yenkantolo ebimyalela ukuba ayohlala ekhaya, angalokothi alubhade emagcekeni asebaQulusini.
Icala eliwuNombolo 5272/2020P phambi kukaMehluleli uSR Balton beliphakathi kukaNdunankulu waKwaZulu-Natal, iKhabhinethi, uMlawuli okunguMnu uSbusiso Mkhize bebhekene neMeya ebambile uMnu uMncedisi Maphisa, uSomlomo uMkhonyovu Khumalo noMasipala AbaQulusi noNtanzi.
Umyalelo ubuthi laba basebaQulusini isiyabavimba inkantolo ukuba bayeke ukudelela imiyalelo engaphansi kweSigaba 139 efakwe yiKhabhinethi yesifundazwe ebaQulusini zingama-21 kuNhlolanja wezi-2019 ephinde yachitshiyelwa ngoMbasa mhla ziyisi-8 ngowezi-2020.
Okunye ukuthi uNtanzi akadingeki emagcekeni kaMasipala AbaQulusi ngaphandle uma eze emhlanganweni wokuqondiswa ubugwegwe.
Akavumelekile ukwenza imisebenzi kaMasipala nokuthi akavumelekile ukuzibandakanya nanoma yini eyenzeka kuMasipala ngesikhathi esamisiwe.
Umyalelo ubuphide uvimbe ibamba Meya, uMaphisa ukuba eseke uNtanzi kunoma yini ayenzayo ephambene nemiyalelo yokumiswa kwakhe.
USomlomo uKhumalo uthe inkinga ukuthi i-ANC izama ukuthatha uMkhandlu AbaQulusi ngendlovuyangena.
“Inkinga esibhekene nayo ebaQulusini ukuthi kudlalwa ipolitiki embi lapho i-ANC izama konke okusemandleni ukuba ithathe uMkhandlu ngendlela engekho emthethweni.
Ngikhuluma nawe nje ngoLwesihlanu bafake isicelo eNkantolo sokuba uNtanzi aphume ayohlala ekhaya. Namhlanje kungoLwesine siyile eNkantolo yafike yasivuna nokusho ukuthi kusasa ngoLwesihlanu uNtanzi simdinga emahhovisi ligamenxe ihora lesikhombisa ukuba azoqala umsebenzi wakhe esamqashela wona ngoba phela isinqumo lesi sokumiswa kwakhe ngeNkantolo sesifana nesingekho,” kusho uKhumalo.
UNtanzi akathandanga ukuphawula ngalolu daba kodwa uphendule mayelana nezinsolo ezibhekiswe esihlotsheni sikaKhumalo esiyisikhulu ngaphakathi kuMasipala okuthiwa sazinyusela umholo ngemali eyizinkulungwane ezingama-R20 izinyanga ezine kusuka ngoMfumfu wezi-2019 kwaze kwayoshaya uMasingana wezi-2020.
IHhovisi leChief Financial Officer libhalele uNkk uSP Dlamini ngoNhlolanja wezi-2020 ukuba le mali ayibuyise yonke ngokuthi idonswe emholweni wakhe njengoba isiyzinkulungwane ezingama-R80.
“Lolu daba lwenzeke ngisamisiwe kodwa owayebambile njengeMeneja ngaleso sikhathi walulungisa washo futhi ukuthi akuzange kube khona inkohlakalo kodwa okwenzeka kwaba ukuthi kwaphambana izinkomishi ngesikhathi uNkk uDlamini elungisa imininingwane yakhe yentela eyayimshaya kakhulu. Wakwenza lokhu ngoba ayezama ukuhlela kahle konke okwakuphathelene nomholo wakhe kanye nemihlomulo yakhe yemoto. Wabizwa ehhovisi wachazelwa ukuthi kwenzeke iphutha wagcina esehola le mali. Kwanqunywa ukuthi ngoba uyazikhalela uthi kwale mali efunekayo akayiholi ngakho uzophila ngani, kwabe sekunqunywa ukuba ithathwe kuleyo ebekelwe izinsuku zakhe zekhefu noma zelivu. Ngakho udaba lwakhe selulungisiwe futhi njengoba ngisho nje ayikho inkohlakalo eyenzeka,” kuchaza uNtanzi.